Indlu encinci eYoder - I-Airbnb
Indlu encinci eYoder
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKendra
Yakhiwe ngasekupheleni kweminyaka yoo-1800, iNdlu encinci yeyona ndlu indala kuluntu lwaseYoder. Izele ngumtsalane wehlabathi lakudala kunye nezinto eziluncedo zale mihla. Ukuba ezi ndonga bezinokuthetha, bezinokubalisa amabali amaninzi! Yongeza le ndawo kuluhlu lwakho lwezinto ekufuneka uzibone kwindawo yethu.... yenye yolunye uhlobo.
Kwakhona jonga olunye uluhlu lwethu luka-Airbnb olubizwa ngokuba yi-"The Chicken House"--enye indawo ebuyiselweyo elindele ukujongwa. Zombini ezi zindlu zisemva kwendlu yethu kwidolophu yaseYoder, iziko lobuhle obumangalisayo.
Umgangatho ophezulu ligumbi lokulala elivulekileyo elinebhedi enkulukazi kunye nebhafu enesiqingatha. Kukho oomatrasi ababini abangatshatanga abafumanekayo xa kucelwe indawo yokulala eyongezelelweyo. Ibhedi yomntwana iyafumaneka xa uyicelile. Kumgangatho ongezantsi kukho igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. Omabini amanqanaba anokufikelela kwiTV kunye neWiFi.
Inqaku elimalunga nesidlo sakusasa: ukuze uhlale ukhuselekile kwaye usempilweni, asikuboneleli ngokutya kwesidlo sakusasa esivela ekhitshini lethu ngeli xesha. Kukho igrosari encinci enkulu kwibhloko enye emantla kuzo zonke iimfuno zakho zokuthenga!
Sihlala kanye kwindlu esecaleni kwindlu yezitena, kwaye singathanda ukudibana nawe xa uphuma malunga! Ukuba ukhetha ukuhlala kuwe, siyakuyihlonipha loo nto, nathi.